15.05.2016 comments (4)
Ahmed Yusuf Ahmed
Waxaan horey u dhaliili jiray siyaasada xukuumada Gaas balse haatan waxaan ciwaankan ku doortay waxaa weeye, waxaan qirayaa inuusan kaligii mas’uuliyada wixii inaga halaaba uusan yeelaneyn. Maxaa yeelay, C/weli gaas waa khaldami karaa waana bini aadam, laakiin, in la waayey wax saxa ama ka dhiidhiya daba jooga, adeecida, iyo u tanaasulka siyaasada Damul-Jadiid oo uu hadda la soo bareeray tan iyo markii uu ogolaaday 4.5-kii uu yiri qaadan meyno xataa haddii uu yimaado Banki Moon.
Waxaynu horey u ogolaanay gudigii dastuurka oo 4.5ka ku dhisnaa markaan ku darsanay Caasho Geele. Waxaynu ogolaanay 37dii qodob ee dastuurka federaalka inay labaxaan xukuumadii madaxweyne Faroole, ka hadalkeedana halkaas uu ku ekaado. Waxaynu ogolaanay in Xasan Shiikh uu Garoowe ka sheego inuu dastuurkii uu bedelay, halkaasna waxaynu ku aqbalnay hadalkiisii ahaa “sharci iga horeeyey lugaha iga xiri mayo.” Waxaynu ogolaanay in Mudug qollo walbaaba ay gooni u sheegato, gobol iyo barna loo aqoonsado dowlad goboleed la mid ah Puntland. Maxaa yeelay, madashii baynu isku cod ku leenahay, aqalkii sare baa isku saami lagala dhigay kuwii seddexda gobol lahaa, iyo boqol-boqolkii xubnood oo loo qaybiyey inay ka codeeyaan caasimadaha dowlad goboleedyada. Waxaynu ogolaanay in 4.5 ay noqoto “the law of the land” ilaa iyo 2020.
Waxaynu ogolaaney in madaxweyne C/weli uu xiriirkii federaalka loo jaray uu soo celiyo dastuurkii la isku hayey oo aan meel la saarin. Waxaynu ogolaanay inuu ‘dual track systemkii” uu burburiyo ka dib codsi uga yimi Madaxweyne Xasan Shiik. Waxaynu ogolaanay in barlamaanka Puntland la kiciyo marka uu soo saaro qodobo adag oo wax ku ool ahna Madaxweyne C/weli inuu dabo maryeeyo. Qodobada uu daba maryeeyey waxay ahaayeen shan qodob oo ku mudeysan inay DF kaga garbaxaan inta aan la gaarin kalfadhigoodii October, 2015. Haddii uu daba maryeeyey waxaynu ogolaanay inuu eryo Gudoomiyihii barlamaanka halkii ay asaga ka eryi lahaayeen. Waxaynu ogolaanay Galmudugtii aan diidnay inaan nabad kula fadhiisano, sandule nala ku ogoleysiiyo, qodobo aqoonsi ahna Gaalkacyo oo laga barakacay aynu kula saxiixano.
Su’aashu Waxaa weeye dadkaan maxaa ka khaldan. Dadkaan waxay lahaayeen hogaan talo iyo go’aan leh, taariikhdeenay ku xusan tahay tan iyo xiligii aynu saldanadaha kala duwan aynu ahayn. Taasina waxay ahayd waqti ragii hogaaminayey ay wax badan ka qaldameyn, kala qubqubnaantoodana uu saancaduhu ka faa’iideystay. Waxaase hadda ay kaga duwan tahay siyaasi haraadan baa uu saancaduhu horjooge inooga dhigay, kaas asagoo isticmaalaya baa markale dadkeenii nin jecleysi lagu kala qeybinayaa, isimadeeniina iyagoon wada hadlin, oo wada socon bay waxay shaqsi ahaan madaxa saarteen oo ku daba feyshan yihiin Nacas, Nin Liita, iyo mid Laba Canleeya!! Maxay inoo dheli doontaa?
wh0cd984845 <a href=http://wellbutrinxl.us.com/>wellbutrin xl</a>
Inman talinjirini haduu taliyo nimaan tegi jirin ayaa taga!!!!!
Waxa wax lala yaabo ah Majeerteenku masaaney u liiteen, waayo Madaxweyne Abdi oo Gudoomiye gobol isu bedeley lama yaabaniye, kuwa weli dabajooga oo u haysta inuu hogaamiye sare yahay, Amaba halyeyega u haysta!!!!!!!
17.05.2016marwo runta jecel
inta aanan ogeeyn ayaa ka badan waxa walaalkeey inoo sheegay lakiin waxeey ila tahay in la sugaayo bohosha la qoday in tartiib loogu wada dhaco toloow yaa u hor gali doona waa dhoowreeyna
Aad ayaan u soo dhoweynayaa maqaalkan oo dad badani ay xogta iyo aragtida ku dhex jirta isu weydiinayaan.